Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ịgba ọgwụ mgbochi COVID maka ụmụaka ngwa ngwa Kwuo ndị dọkịta ER
Ka ọgwụ mgbochi COVID-19 na-adị maka ụmụaka dị afọ 5 ruo 11, kọleji America nke ndị dibia bekee (ACEP) na-agba ndị nlekọta na ezinụlọ ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ma mee ihe ndị dị mkpa iji chebe ụmụaka n'oge ezumike na oge flu na-abịa.
Gillian Schmitz, MD, FACEP, onye isi oche ACEP kwuru, "Ndị dọkịta mberede na mba ahụ na-aga n'ihu na-ahụ ka ọrịa COVID-19 nwere ike isi dị ize ndụ na ndị ọrịa nọ n'afọ niile, ọkachasị ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi." “Ekele dịrị, ọgwụ mgbochi ndị ahụ adịghị mma, dị irè ma ugbu a ha dị. Ịgba ụmụaka gị ọgwụ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji chebe ezinụlọ gị ma nyere anyị aka imeri nje a. "
O yikarịrị ka ụmụaka ga-enweta ọrịa siri ike sitere na COVID-19 karịa ndị okenye, mana ihe egwu dị na COVID ka dị oke mkpa. Ihe dị ka nde ụmụaka 1.9 dị afọ 5 ruo 11 ka achọpụtala COVID-19, dịka erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC). Enweela ihe dị ka ụlọ ọgwụ 8,300 nwere nke atọ chọrọ nlekọta ahụike yana opekata mpe 94 nwụrụ n'ime afọ ahụ. CDC na-atụ aro ka onye ọ bụla dị afọ 5 na karịa nweta ọgwụ mgbochi COVID-19.
Ndị dọkịta na-ahụ maka ihe mberede chọrọ ime ka obi sie ndị na-elekọta ya ike na ọgwụ mgbochi ndị dịnụ dị mma ma dị irè. A naghị eme ngwa ngwa mmepe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ngwaahịa ndị a na-agbaso usoro siri ike iji zute usoro nchekwa nchekwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA). Dị ka ọgwụ mgbochi ndị okenye, mmadụ ole na ole na-enwe mmetụta dị n'akụkụ. Mmetụta ndị a na-ahụkarị na-edekọ n'oge usoro nchekwa dị ukwuu dị nro ma nwee ike ịchịkwa n'ụlọ, gụnyere ogwe aka mgbu, ọbara ọbara n'akụkụ ebe ịgba ọgwụ, ma ọ bụ ike ọgwụgwụ.
Onye ọ bụla nwere ike ime ihe iji chebe onwe ya site n'ịgba ọgwụ mgbochi na ịgbaso ụkpụrụ nduzi mpaghara, ịpụpụ mmadụ, na ikpuchi ihu ha. CDC na-atụ aro ka ndị na-elekọta ụlọ nyochaa mmekọrịta chiri anya nwatakịrị na ndị ọzọ wee mee ihe iji chebe nwatakịrị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ezinụlọ rịa ọrịa ma ọ bụ nwee mgbaàmà nke COVID-19. Nke ahụ nwere ike ịgụnye idobe nwatakịrị n'ụlọ na ịchọ nlekọta kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na nwatakịrị na-arịa ọrịa. Ma ụmụaka ma ndị okenye nwere ike ịgbasa nje a ọbụlagodi na ha nwere asymptomatic.
Maka nchebe agbakwunyere n'oge ihe nwere ike ịbụ oge flu dị ize ndụ, ndị dọkịta mberede na-agba ndị nlekọta na ụmụaka ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi megide COVID-19 na flu. Ọ dị mma ịnweta ọgwụ mgbochi flu na ọgwụ COVID n'otu oge, ọ bụghịkwa akaha ka ịgbara flu n'oge maka mmalite ihu igwe oyi na oge ezumike na-ekwo ekwo.
Dị ka ndị na-elekọta ụmụaka na-enyocha ihe mgbaàmà nke COVID-19, dị ka nnukwu ahụ ọkụ, akpịrị akpịrị, ụkwara, afọ mgbu, ma ọ bụ isi ọwụwa, ọ dị oke mkpa ịmara mgbe ị ga-aga na ngalaba mberede, ma ọ bụ maka COVID-19 ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. ọrịa ma ọ bụ mmerụ ahụ.
"E nwere ihe ịrịba ama nke ihe mberede nke a na-ekwesịghị ileghara anya," Dr. Schmitz kwuru. "A zụrụ ndị dọkịta mberede ka ha na-ahụ maka ụdị egwu ahụike niile, onye ọ bụla nwere ike ijide n'aka na ngalaba mberede bụ ebe kachasị nchebe, maka ndị ọrịa nọ n'afọ ọ bụla, mgbe ha nwere ihe mberede ahụike."